Aslaama Calykum Warax matulaahi wabaraka tuhu.
waxaan halakan ku soo ururiyey Taariikhda Culimada Muslinka iyo Somalida.
Kanaalka Satalaytka ee Aljaziira
Sheekha Mujaahidka ah Axmed Yaasiin / Xarunta Warfaafinta Falastiiniyiinta
Taariikh Nololeedkii Dr. Sh. Cabdicasiis Al-Rantiisi
Dr. Sheekh Cabdicasiis Cali Cabdilxafiid Alrantiisi wuxuu ku dhashay tuulo yar oo la yidhaahdo Yibna oo u dhaxaysa Casqalaan iyo Yaafa taariikhdu markay ahayd 23/10/1947kii lix bilood markii uu jiray ayay sanadkii 1948kii reerkiisu u qaxeen xerada qaxootiga ee Khaan Yuunis oo ku taala gacanka Qasa, qoyskooduna wuxuu ka koobnaa 6 wiil iyo laba gabdhood.
Lix sano markii uu jirey ayuu galay dugsi ay gacanta ku haysay Wakaaladda Gargaarka iyo Shaqo siinta Falastiiniyiinta. Sanadkii 1965kii ayuu dhammaystay waxbarashadiisa dugsiga sare.1972kii ayuu ka qalin jabiyay kulliyada caafimaadka ee Jaamacadda Al-Iskanderiya ee dalka Masar,isla jaamacddaas ayuu ka qaaday shahaadada Maajisteerka isagoo ku qaatay caafimaadka qaybta caruurta. Sanadkii 1976kii ayuu shaqo ka bilaabay dhakhtar Naasir la yidhaahdo oo ku yaala xerada Khaan Yuunis.
Waxaa uu ka soo shaqeeyay Jaamacadda Qasa tan iyo intii la furay sanadkii 1978kii ,sanadkii 1983kii ayaa xabsiga loo taxaabay markii lagu eedeeyay inuu diiday bixinta cashuurta uu siinayo dawladda Israa'iil, mar kale ayuu sanadkii 1988kii xidhnaa 21 cisho.Sanadkii 1987kii ayuu koox ka mid ah hormoodadii dhaqdhaqaaqyada Islaamiga ah la aasaasay Dhaqaaqa iskacaabinta Islaamiga ah ee Xamaas. 4.2.1988 ayaa xabsiga loo taxaabay iyadoo lagu eedeeyay inuu ka qayb qaatay falal ka dhan ah Israa'iil waxaanu ku jiray muddo laba sano iyo badh ah waxaana la soo daayay 4.9.1990kii.Isla sannadkaas ayaa haddana xabsiga loo taxaabay isagoo ku jiray muddo hal sano ah. Xabsiga ayuu ku dhex xafiday Quraanka Kariimka ah isagoo qol kula xidhnaa Ilaahay ha u naxariistee Sh. Axmed Yaasiin. 17.12.1992 ayaa isaga iyo 400 oo qof oo kale oo ka kala tirsanaa ururada Jihaad iyo Xamaas ayaa loo tarxiilay koonfurta Lubnaan halkaasoo ahayd meeshii uu magaciisu ku soo shaac baxay kaddib markii uu af hayeen u noqday dadka laga saaray waddankoodii.Kaddib markuu dib uga soo noqday xeradii ay koonfurta Lubnaan kaga jireen ayay ciidamada Israa'iiliyiintu haddana xabsiga u taxaabeen, halkaasoo uu ku jiray ilaa badhtamihii sanadkii 1997kii. Kaddib markii uu xabsiga ka soo baxayna waxaa xabsiga haddana dhigay xukuumadda Falastiiniyiinta ee ka jirta Qasa iyo Daanta galbeed halkaasoo dhawr jeer lagu celceliyay iyadoo marka uu ka soo baxaba mar kale lagu celinayay wuxuuna guud ahaan ku jiray celcelis ahaan 27 bilood.Bishii Juun 2003dii ayuu ka badbaaday gantaal ay ku dhufteen diyaaradaha Israa'iil gaadhi uu ku jirey isagoo gacanka Qasa jooga waxaana ka soo gaadhay dhaawac isaga iyo wiilkiisa oo la socday.Kaddib 22kii Maarso 2004ta markii la dilay hoggaamiyihii hore ee Xamaas Sh. Axmad Yaasiin Ilaahay ha u naxariistee ayaa loo doortay hoggaamiyaha Xamaas ee Qasa markaasoo uu ballan ku qaaday in loo aari doono, hase bil in ka yar dabadeed taariikhdu markay ahayd 17kii Abril 2004ta ayuu ku geeriyooday gantaal ay diyaaradaha Irsii'iil ku dhufteen gaadhi uu la socday waxaa kaloo isla goobtaas ku dhintay labo ruux oo la socday.Ilaahay ha u naxariisto.
Shiikh Cumar faaruuq waa ka fadhiya dhinaca Midig
Taariikh Gaaban oo ku saabsan
Sheekh Cumar Faaruuq Xaaji Cabdi-Suldaan Xaaji Maxamuud wuxuu ku dhashay degmada Qooxley oo Qallaafe iyo Qabridaharre u dhaxeysa, halkaasi oo magaceeda caanka ahi yahay "Carmaale" . Waxa uu dhashay sida loo sheegay goor barqo ah, maalin Khamiis ah, xilli dayr ah, bisha iyo sannadkase lama yaqaan.
Sheekh Cumar-Faaruuq wuxuu ka dhashay qoys diineed. Hooyadiis, Caasha Sheekh Axmed Guure, isaga oo 3 jir ah ayey geeriyootay, aabihiisna wuxuu ka dambeeyey saddex sano. Isagoo weli la gudin baa Aabbihii dhintey. Waxaa markaa Sheekh Cumar Faaruuq soo koriyey ayeeyadiis hooyo iyo walaalihiis ka waaweynaa. Sheekha dugsiga qur'aan, dugsigii 1aad wuxuu galay isagoo 5 jir ah, dugsigii labaad isaga oo 9 jir ah . Macallinkiisu wuxuu ahaa abtigii hooyadii la dhashay oo macallin Xuseen sh. Axmed-guure la yiraahdo. Dugsigaasaa isagoo 12 jir ah uu quraanka ku dhameeyey, hase yeeshee dusha kama qaban. dugsigii 3aad isagoo 14 jir ah ayuu galey. Dugsigaas ayuu Cumar-Faaruuq quraanka dusha uga qabtey isagoo 14 jir ah. Dabadeed qur'aankii waa uu hilmaamay, sababtuna waxay ahayd isagfoo ku mashquulay shicir wax la oran jirey oo dhaqan u ahaa qoyska uu ka dhashay ah ilaa uu shicirkii dusha ka qabtey.
Markaa qur'aanka Sh. Cumar-Faruuq 3 goor buu dhameeyey. Ka dibna isagaaba macallin-dugsi noqdey, markaasoo uu 14 jir ahaa. Mar wuxuu ku qabtey dugsi magaalada Qallaafe isaga oo kutubta raacda oo xer ah, una dhiga carruurta reerkii uu markaas uu la noolaa. Reerkaasi oo uu lahaa nin la yiraahdo Olol Diinle, waxay saaxiib ahaayeen aabahiis. Dugsigii labaadna wuxuu u qabtey niman reer Ugaas la yiraahdo, meel la yiraahdo Maraacaato. Dugsigaas labaadna dugsi buu kiciyey.
Cilmiga Xadiiska ayuu markaa nin Sh. Ibraahim Muxumed Cali (Sh.Ibraahim Suuley) ka akhristay. Dabadeed Cumar-Faaruuq wuxuu galey madrassa ku taalley Xamar oo la oran jirey "Machadu-Diin bil-Muqdisho" oo ay Masaaridu dhigi jirtey. Halkaasi waxa uu ku dhameeyay dugsiga dhexe. Dugsiga sare waxa uu ku dhameeyay Machad-Altadaamun al Islaamiyah bil-Muqdisho oo ku oolli jirey lambar afar oo ay sucuudigu maamuli jireen. Kadib waxa uu galay Jaamacadda Medina , kulliyadda "Al-Dacwa wa-usuula-Diini", markaasoo taariikhdu ahayd 1975, wuxuuna ka qalin-jabiyey 1979kii.
Sheekh Cumar Faaruuq intii ka dambaysay burburkii Soomaaliya waxa uu waday barnaamij ballaaran oo ka kooban seddex qaybood. Kan hore waa midaynta culimada diinta ku abtirsada, mid mid ama xisbi xisbi ha ahaadeene; Kan labaad (Tawjiihul Uzucamaa) la talinta iyo toosinta ragga qabqablayaasha ka ah siyaasadda Soomaaliya; iyo qaybta seddexaad (Tadqiiful-Ummah) oo ah waxbaridda ummadda Soomaaliyeed, oo siduu sheegay Shiikhu "goorahan dambe Ilaahay hanuun siiyey" sidii looga haqabtiri lahaa diinta, hadday tahay akhriska kutubta ama wacdi iyo waano.
Laba goor ayuu sannadkan Soomaaliya tegay Sheekh Cumar Faaruuq, halkaasi oo uu ka bilaabay tafsiir xaafadda km 4, duruustaasi oo maqal iyo muuqaalba laga duubay si mar walba loo isticmaalo faafiddooduna u fududaato. Waxa uu islamarkaa Jimcayaasha jeedin jiray muxaadaro looga kala yimaado Muqdisho iyo magaalooyinka ku hareeraysan sida Afgooye, Marka, iyo Qoryoolay. Tirada ka soo qaygasha dhagaysigiisa waxa lagu qiyaasay 4000 oo qof markiiba, iyadoo celcelis ahaan ay 1500 oo ka mid ahi haween yihiin.
Intii uu ku sugnaa Toronto waxa uu ka akhriyey laba risaalo oo kala ah "al-caqiidal-Waasidiyah" iyo "al-caqiidal daxawiyah". Waxa kaloo uu bixiyey muxaadarooyin kale oo ay ka mid yihiin kuwo dumarka u gaar ah iyo kuwo ragga u gaar ahba.
Sheekh Cumar Faaruuq waxa uu leeyahay 13 carruur ah iyo afar xaas, iyadoo ubadkiisa iyo kuwa ay sii dhaleen ay gaarayaan dhowr
Taariikh Nololeedkii Sheekh Maxamed Macallin
Maxamed Xaaji Cabdullaahi "Ingiriis"
Waxaa dhawaan ku geeriyooday dalka Talyaaniga Sheekh Maxamed Macallin Xasan oo ahaa aabbihii baraarugga islaamdoonka Soomaaliyeed. Sheekh Maxamed Macallin waxaa lagu aasay magaalada Muqdisho, waxaana aaskiisa iskugu yimid kumanaan-kun oo qof oo iskugu jira culumada, ducaadda iyo dadweynaha ku nool Xamar. Bogga Islaamka ee tirsigan waxaan ku soo qaadanaynaa taariikh nololeedkii Sheekh Maxamed Macallin Xasan.
Sheekh Maxamed Macallin wuxuu ku dhashay sannadkii 1934-kii baadiyaha magaalada Buur Hakaba. Wuxuu Qur’aanka ku bartay isla goobtaas. Sagaal jir markuu ahaa ayuu Qur’aanka dhammeeyey, kaddib wuxuu billaabay inuu u safro dhanka galbeed iyo magaalada Harar, halkaas oo 20 sano ku dhowaad uu culuunta kala duwan ee Islaamka ku baranayay.
Kadib wuxuu u soo wareegay Sheekhu gobollada Waqooyi ee Soomaaliya, halkaas oo markii ugu horreysay Masjidka Jaamaca ah ee weyn ee magaalada Hargeysa uu ka billaabay tafsiirka Qur’aanka kariimka ah sannadkii 1952-kii. Muddo yar kadib wuxuu Shiikhu u safray dalka Masar halkaas oo waxbarashadiisa markii la qiimeeyey loo oggolaaday fasalka ugu dambeeya ee dugsiga sare ee Macaahidda Al-Azhar. Sannad kaddib wuxuu ku biiray Jaamacadda Al-Azhar, gaar ahaan. Kuliyadda Usuulu-Diin, qeybta caqiidada iyo falsafadda. Halkaasna wuxuu ka qaatay Shahaadada (M. A.) Mastrate. Dabadeed, wuxuu u gudbay darajada Diktorate PhD. Sheekh Maxamed wuxuu cilmibaarista ugu danbaysay ka qorayey Iimaanka iyo raadka uu ku leeyahay qofka iyo bulshada. Sheekhu isagoo aan dhamayn ayuu ku noqday Soomaaliya sanadkii 1968.
Intii uu Qaahira joogay Sheekh Maxamed wuxuu ahaa madaxa ardayda Soomaaliyeed ee halkaa ku noolayd. Febraayo 1968-dii ayuu Sheekh Maxamed Macallin Allaha u naxariistee ku soo laabtay dalka. Febraury illaa bishii September sanadkii 1968 wuxuu Shiikhu sameeyey daraasad la xiriirta xaaladda diineed ee dalka Soomaaliya ee uu xilligaas ku jiray dalku.
Arrintaasi uu ku dhaqaaqay maamulkii Maxamed Siyaad Barre waxba kama beddelin Sheekh Maxamed Macallin, sida uu noo sheegayo Sheekh Axmed Cabdi Dhicisow, maadaama uu lahaa dad fara badan oo aad u jeclaa noloshiisa wax ciriiri ah ma aysan gelin. Wuxuu sii watay Tafsiirkiisii. Dowladdii Barre ayaa xirtay sannadkii 1976-kii illaa 1982-kii isagoo ku xirnaa xabsigii Labaatan Jirow oo dhib badan loogu geystay. Markii la soo daayey ayuu dib u billaabay Tafsiirkiisii.
Geeridiisa qof kasta ayaa ka naxay oo Soomaaliyeed. Waxa uu ku tiraabay Sheekh Axmed inay jeclaan lahaayeen inuu maanta la joogo, waxaa naga geeriyooday caalim Islaami ah, oo sida kaalintiisa lagu buuxiyaa ay adag tahay” ayuu yiri Sheekh Axmed Cabdi Dhicisow.
Sheekh Maxamed waxaa lagu yaqaannay dadka uu ka weyn yahay inuu u adeego, xataa sida la ii sheegay shilka uu Shiikhu ku galay Sacuudiga waxay ahayd inuu u adeegay nin ay ku wada noolaayeen hal meel uu wax uga doonay dukaan. Dabadeed, asagoo jidka goynaya ayaa waxaa ku yimid gaari ordaya. Arrintaasi waa mid aan shaki lahayn oo lagu yiqiinnay shiikha. Tawaaduc iyo u jajabni dad u adeegidiisa mid lagu yaqaannay oo caam ah bay ahayd, Allaha u naxariisto” ayuu yiri Shariif Cabdi Nuur.
Sheek Maxamed Xaaji Yuusuf oo ka mid ahaa culumadii ka soo qeyb-gashay aaska Sheekha ayaa isaguna ka hadlay, wuxuuna yiri, Sheekh Maxamed waxa uu ahaa ahammu-shaqsiya diiniya oo ku suga Soomaaliya. Hadda oo uu dhintayna ma lihi arrintaas ee waxaan qoray sanadkii 1982, mar ay I soo weydiiyeen Raabidadu. Waxaana marqaati ka ah sida ay maanta shacabka Soomaaliyeed u aaseen.
Mar ay odoyaal ka tirsan deegaanka Bay iyo Bakool wax ka weydiiyeen xabsigii labaatan jirow iyadoo laga furayo halkaas maxkamado Islaami ah, Sheekh Maxamed Macallin waxa uu sheegey, inuu xilligaasi ahaa xilligii ugu adkaa noloshiisa. Waxay odoyaashaasi ugu tageen hoteelkii uu deggenaa, waxaana ay ku yiraahdeen Sheekhow waxaan ka mid ahayn ardaydaadii Tafsiirka kaa baran jirtay. Xabsigii Labaatan Jirow markii aad ku jirtay xaaladdaada waan la soconnay ee waxaan ku su’aaleynaa sidee ayaad u kala garan jirtay sannadka, maalmaha, usbuuca iyo bishaba?.
Waxa uu su’aashaasi uga jawaabay Sheekh Maxamed Macallin waxaan ahaa xaafid Qur’aan. Usbuuca waxaan ula socday toddobada jallaad ayaan maalin walba jallaad ka aqrin jiray. Bishana waxaan ula socday maalin walba jus ayaan akhrin jiray. Sannadkana, cilmiga xiddigaha ayaan wax ka aqiinnay, waxaana xiddigaha iyo qorraxdaba kala socday duleel yar oo ku yaallay saqafka kore ee qolka. Muddo kaddib duleelkii yaraa ayaa geed ka soo dul baxay oo iga qariyey xiddigaha sidii aan u arki lahaa. Madaxa askarta xabsiga ayaa la ii geyn jiray maalmo kaddib si la ii wareysto xaaladdeyda. Waxaan u sheegay in meel duleel ah oo ay qorraxdu ka soo gasho ay dhib igu hayn jirtay, Ilaahay baa meeshii qorraxdu ka soo galaysay ka soo bixiyey geed oo qaraxdii aan ka reystay. Kolkaa aniga waxaan rabaa si geedka loo gooyo, isla markiiba way gooyeen, waana sidii aan rabay ayuu yiri Sheekhu.
Mar uu ka hadlayey wixii ugu yaab badnaa ee uu kala kulmay xabsigaas, waxa uu yiri waxaa iigu yaab badnaa inay anigu caado ii ahayd inaan salaad walba aadaamo, waxayna igu yiraahdeen askartu ‘waa inaad joojisaa aadaanka.’ Waxaan iri xabsiyada dalka oo dhan waa laga aadaamaa ee maxaa keligey la iga rabaa, waxayna yiraahdeen ‘waa amar jooji,’ anigana ma aanan joojin oo sidii ayaan u watay aadaankii kaddibna qolkii dhexdiisii ayay igu xir xireen (miig). Isma lahayn adoo nool ayaad ka baxaysaa ayuu yiri Sheekh Maxamed Macallin. Sidii anigoo u rafaadsan ayaa la iga soo beddelay Labaatan Jirow oo waxaa la i soo beddelay Xabsiga Dhexe, waxaana la igu xiray qol ciriiri ah oo Shimbiroole la yiraahdo, magacaasna waxaa loogu bixiyey waxaa ka buuxay dhilqo fara badan oo sidii shimbiraha oo kale kugu soo dagaya. Kaddib askartii gudaha ee xabsiga ayaa go’aansatay inay wax ii qabtaan. Qolkii ayay iga soo bixiyeen, kaddibna inta ay dhaqeen oo ay mariyeen rinji kaddibna ay ku xireen nal ayay igu yiraahdeen ‘Shiikhow naga raalli ahaaw,’ markaas kaddibna waxay noqotay in qolkii ay ku soo bixiyaan maxaabiista kale laaluush si ay u soo galaan ayuu yiri Sheekh Maxamed Macallin Xasan.
Dhallinyarada baraarugga Islaamka ee Muqdisho ayaa ka sameeyey Sheekh Maxamed Macalliin qoraallo badan oo taariikhdiisa ku saabsan, waxaana ay ka sheekeeyeen bilowgiisii geeddi socodka iyo markii uu billaabay inuu raadiyo cilmiga diinta. Waxaa qoraalladaasi ku jira in markii Shiikhu yaraa ee uu geeriyooda aabbihiis Macallin Xasan, ay isku qabsadeen adeeradiis iyo abtiyaashiis. Waxaa dhex galay isticmaarkii waagaa joogay oo labada dhinac laba gees kala istaajiyey, dabadeedna amray in Sheekha oo yar la istaajiyo dhexdooda, kaddibna halka uu raaco ay qaadanayaan. Dabadeed wuxuu shiikhu raacay abtiyaashiis, sida uu sheegayo mid ka mid ah dhallinyaradii Shiikha haysay taariikhdiisa.
Abtigii ayaa inta uu u dhiibay kitaab safiino ah safar ku soo daray si uu kitaab ugu aqristo Baydhabo. Beydhabadii kuma uusan nagaanin Shiikhu oo asagoo meel fadhiya oo nin Imaam uu tujiyey is leh kitaabka ha kuu akhriyo ayaa nin kale soo ag fariistay oo yiri ‘kaalay anigaa kuu akhrinaayo oo galbeed baan ku geynayaa.’ Ninkii buu iska soo raacay. Wuxuu yimid Jigjiga iyo agagaarkeeda. Sheekh la yiraahdo Sheekh Maxamed C/llaahi oo dugsi meesha ku haya ayuu arkay. Habeen bey la hoydeen asaga iyo dad kale. Sheekhuna wuxuu ku haray halkaas oo uu ka bilaabay kitaabkii ugu horreeyey Safiinaha ah oo muqtasir ah.
Sheekhu, markii uu ka tagay gobolka Soomaali Galbeed waa uu lugeeyey, waxaana uu maray dalalka Itoobiya, Ereteriya, Suudaan illaa uu ka gaaray dalka Masar dabayaaqadi sannadkii 1958-kii. Inta uusan ka tegin gobolka Soomaali Galbeed waxa uu ka yimid magaalada Hargeysa oo uu ka soo baxay, waxa uu maray Jigjiga iyo magaalooyin kale oo bariga dalka Itoobiya ah. Intii uu joogay Masar Sheekhu wuxuu arday u noqday Sheekhul-Azharkii xilligaas, Sheekh Cabdulxaliim Maxmuud. Sheekh Cabdulxaliim Maxmuud ayaa u ahaa ninka la talinayey markii uu diyaarinayey PhD-da.
Sheekh Maxamed Macallin Xasan, waxa uu dalka Masar wax ka baranayey markii ay sida adag isugu hayeen dalkaas xarakada Al-Ikhwaanul Muslimiinka iyo dowladda, dabayaaqadii sannadkii 1950-kii iyo bartamihii 60-kii. Waxay ahayd waqti ay isku herdiyayaan xarakooyin fara badan oo dhanka saaxada fikriga iyo siyaasadda. Xarakada walaalaha Muslimiinta ayaa aad u shaac baxday. Sheekha waxaa raad ku yeeshay afkaarta raggii hormoodka ka ahaa oo u akhriyey kutubadooda. Waxaa ka mid ahaa culumadaas Al-Imaam Shahiid Xasan Al-Banaa, Shahiid Sayid Qudub, Hudeybi. Markii Sayid Qudub la daldaleyey, Shiikhu waxa uu joogay Qaahira, wuxuuna u sheegay BBC-da inuu runtii aad ugu saamoobay arrintaas, aadna uga xumaaday.
Ila soo xidhiidh hoos emailka firi
Web kayga kale halakan ka sii fiiri